Salmeterol Xinafoate मूल्य, बिक्री
कैस कुनै .: 94749-08-3
रूप:सेतो देखि अफ व्हाइट ठोस
पग्लिने बिन्दु:137-138 ° C
Salmeterol Xinafoate CAS 94749 08-०3- About को बारेमा विवरण:
साल्मेटरोल xinafoate एक शक्तिशाली र एक लंबे समय अभिनय β2-adrenoceptor एगोनिस्ट हो। यो गम्भीर लगातार दमा र दीर्घकालीन अवरोधक फुफ्फुसीय रोगको उपचारको लागि सिफारिस गरिएको छ।
कृपया कुनै पनि समयमा यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ साल्मेटरोल Xinafoate.
यदि तपाईं जान्न चाहानुहुन्छ भने साल्मेटरोल Xinafoate मूल्य, कृपया हाम्रो ग्राहक सेवा हॉटलाइन +86 592 5365887 XNUMX XNUMX XNUMX मा कल गर्नुहोस् वा ईमेल पठाउनुहोस् [ईमेल सुरक्षित].
PEG-8 हुनुहोस् ...